कहाँ पुग्यो गौचन हत्याकाण्डस्को अनुसन्धान ? – .:: Welcome to Saurahaonline.com
कहाँ पुग्यो गौचन हत्याकाण्डस्को अनुसन्धान ?
काठमाडौँ, १० कात्तिक । निर्माण व्यवसायी शरदकुमार गौचन हत्याको १८ दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
२३ असोजको मध्याह्नमा शान्तिनगरमा गोली हानी गौचनको हत्या गरिएको थियो । घरबाट निस्केका गौचनमाथि आपराधिक समूहले सार्प सुटरको प्रयोग गरी गोली हानेको थियो ।
घटनाको भोलिपल्टै प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी गणेश केसीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार समितिले गोली प्रहार गर्न चार जना खटिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्भावित अभियुक्तको स्केचसमेत बनाइसकेको छ ।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार भारतमा बसी असुली धन्दा चलाइरहेका मनोज पुनको समूहले नै गौचनको हत्या गरेको निष्कर्षमा त प्रहरी पुगेको छ तर त्यसका पर्याप्त आधार भने जुटाइसकेको छैन । प्रहरीका अनुसार हत्यामा नाइन एमएमको पेस्तोल प्रयोग भएको थियो ।
गत चैतमा गौरीघाटमा गुन्डा नाइके दावा लामामाथिको गोली प्रहारमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो । यस आधारमा पनि प्रहरीले गौचन हत्यामा मनोज पुन समूहको संग्लनता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
एक वर्षमा करिब ३ अर्ब बराबरको फलफूल भित्रियो ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०७:२९
चेपाङ महिलाको जीवन, २१ वर्षको उमेरमा ४ बच्चा ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:५९
भारतबाट आएका सिकारीले बाँदर समात्न थाले ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:५२
शौच गर्न जाँदा छोएको निहुँमा कुटिए डोम आमाछोरी ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:४४
आज मिति २०७५ फागुन ०८ बुधवार यस्तो छ तपाईको राशिफल ८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:३२
खैरहनीमा महिला कानुनी अधिकार तालिम सकियो ७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २१:००